Chirungu vhidhiyo kutaura
Chirungu vhidhiyo kutaura.
Nhasi vanhu vazhinji vanoziva nezve mikana yevhidhiyo yekukurukurirana Russian roulette. Kunyangwe vanhu vazhinji vanoedza kuwana chino chengetwa kamwe chete pazuva kuitira kutaura vakasununguka nevamwe vanhu: vanobva kune mamwe maguta, nyika nemakondinendi. Vhidhiyo yekukurukurirana Russian roulette iri nyore nekuti munhu wese anonyanya kutaura Russian muchigadzirwa ichi. Zvikasadaro, hapana zvinorambidzwa.
Munguva pfupi yapfuura, Russian roulette vhidhiyo yekukurukurirana iri kuwedzera uye yakakurumbira. Saka inguva yekutaura nezve hunhu mune vhidhiyo yekukurukurirana Russian roulette. Mubvunzo uyu unotambudza vazhinji netizens. Ichi chinyorwa chichagadzirisa zvinotevera zvinotevera:
i chihure mune chevhidhiyo chat "Russian roulette"
nei uchifanira kutevera hunhu mune yevhidhiyo yekutaura
mhando dzehunhu mune yevhidhiyo hurukuro Russian roulette
yakakosha mitemo yemafambiro pane yevhidhiyo chat Russian roulette
nzira yekuva mukuru converationalist muvhidhiyo yekukurukurira roulette
A ikozvino ngatimboenda muchidimbu kupfuura ese evanotaura mavara muRussia roulette vhidhiyo kutaura. Ngatitangei nemubvunzo wekutanga:
Chii chinongedzo pane vhidhiyo yekukurukurirana Russian roulette?
Chero munhu wese anoziva kuti hunhu hwekuzvibata mutemo mune mamwe mamiriro uye mune dzimwe nzvimbo. Zvichava zvakafanana paInternet. Etiquette paInternet uye pane vhidhiyo chats ndiyo mitemo yemafambiro, pamwe nechitarisiko, tsika, asi chete yatove online. Unhu hwepaInternet hauna kusiyana zvakanyanya kubva kune hunhu hwakareruka. Asi zvakadaro pane misiyano. Ndo izvo zvatinozotaura nezvazvo panguva yekukurukurirana kwehupfumi pane vhidhiyo chat Russian roulette. Vazhinji vanhu vazhinji vanoda kuita shamwari itsva, kana shamwari shamwari, paInternet. Kutaurirana kwemavhidhiyo kunonyanya kuita izvi.
Nhasi, munhu wese anogona kuenda kune chero vhidhiyo yekutaura uye kutsvaga munhu wekutaura naye. Vhidhiyo yekukurukurirana roulette inosiyana neye nyore vhidhiyo yekukurukurirana mune zvimwe zvinhu:
interlocutor yakapihwa zvachose zviga
Iwe unogona kukanganisa kutaura chero nguva uye kutanga kutaura nevamwe vanhu.
haadi kunyoresa kuti utange kutaura
Iwe unogona kutaura nevanhu vanoverengeka muchikamu chimwe.
Izvi ndizvo zvinoratidzira iwo maitiro emirairo panguva yekutaurirana pane vhidhiyo chat roulette. Kunyanya muvhidhiyo kutaura Russian roulette. Mitemo yemafambiro panguva yekukurukurirana kwepamhepo iri nyore uye inonzwisisika kune wese munhu. Kunyange zvakadaro, zvakakodzera kuziva nezvavo pasina kukundikana. Uye nekukurumidza iwe uchidzidza iyi mitemo, ndipo paunonyanya kuzorodzwa uye kunakidza kutaura nevamwe vanopfuudzirana kuchave. Kubatsira kwakawanda kwauchawana semufambisi.Izvi zvinogona kunge zvichitove chiratidzo chehunhu hwakaipa. Uye zvinopesana, kana mitemo yemaitiro mu Network pane vhidhiyo kutaura Russian roulette inoremekedzwa, ipapo vanopindirana nemafaro vanotaurirana uye vanofunga kutsvaga musangano wepamhepo newe. Ichi ndicho chokwadi chiri nyore: kana iwe ukacherekedza hunhu, ipapo kutaurirana kunounza mafaro makuru kubva kumugariro pachawo. Uye munhu anodiwa nevamwe seanoperekedza anokwanisa kuita shamwari nyowani kana vaanozivana. Kana kungotaurisa zvekunakidzwa.
Kana iwe ukacherekedza hunhu pane vhidhiyo yekukurukurirana roulette, ipapo iwe unogona nyore nyore kuwana akawanda mabhenefiti kubva kune vamwe vanopindirana. Uye zvakare zvinokwanisika kuchena kunze kwevasina kukodzera kukodzera kutaurirana munguva pfupi pfupi. Haisi chakavanzika kuti mameneja anotarisisa zvichemo uye ovarambidza nguva, kana vanhu vakanaka vasina kuzvibata maererano nemirairo. Kana iwe ukasachengeta hunhu uhu hunogamuchirwa pavhidhiyo yekukurukurirana vhidhiyo, ipapo vanogona kunyora kunyunyuta pamusoro pako uye mune iyi nyaya inogona kuve yakakura mukana yekurambidzwa kwechinguva. Kana zvichemo zvikagamuchirwa kazhinji, ipapo mukana chaiwo wechirambidzo uchaonekwa zvachose.
Ichi chingave chimwe chezvikonzero zvikuru uye mhinduro kumubvunzo: nei vhidhiyo roulette yekuchengeta hunhu?
Iyi, chokwadi, ndiyo mhinduro, asi kwete iyo yega. Pamusoro pekurambidzwa kunobvira, pane zvimwe zvisina kunaka kana hunhu husina kuremekedzwa. Semuenzaniso, mamiriro anogona kubuda kana iwe uchinyatsoda munhu wauri kutaura naye uye uchida kuramba uchitaura naye, asi iwe hauzive maitiro ekuita izvi. Izvi zvichavawo chinhu chekuzvibata. Hwese hunhu ndiyo mitemo yekutaurirana. Uye kuziva nzira yekuwedzera imwe munhu kamuri yekutaurirana inogonawo kuve chikamu chekuzvibata.
Kana iye anopindira achinyara uye akanyarara kwenguva yakareba, saka anopomerawo mitemo yehukomba. Kupfuura zvese, chero kutaurirana kunosanganisira kuitirana zvinhu. Naizvozvo, zvichashamisa kana munhu akataura nguva dzese, uye mumwe wacho achingoramba akanyarara.
Iko kucherechedzwa kwetsika yekuita tsika inoita Russian vhidhiyo roulette yekukurukura inonakidza uye inobatsira.
Mhando dzeuhuremu muvhidhiyo yekukurukurirana Russian roulette.
Etiquette inogona kusiyana. Iyo yakawanda yehuwandu hwekuzvidzora inogona kukamurwa kuita:
Mhando idzi dzehupfumi dzinogona kufungwa nezvakanyanya pakutaurirana pavhidhiyo chat Russian roulette. Ngatitarisei uye tiongorore zvakadzama mhando yega yehunyanzvi.
Kupfeka zvipfeko zvinoreva kuti iwe unofanirwa kupfeka panguva yekutaura kwepamhepo. Zvirinani kuitira rukudzo rweanoperekedza. Vasikana nevakadzi havafanirwe kuratidza mazamu asina kupfeka uye dzimwe nhengo dzemuviri wavo dzinozopenya pabonde chero nenzira.
Murume ari nani kupfeka.Izvi zvinoreva kuti vaviri vanopindira vanofanira kunge vakapfeka pavanenge vachitaura neRussia roulette.
Kana tikataura nezvenyaya yekugadzira, saka zvinhu zvese zviri nyore. Kana iwe ukapfeka maket zvakanyanya kujeka, zvinogona pakarepo kusundira kure kure anokwanisa kupindira. Kana pamwe kukwezva. Iwe haumboziva zvechokwadi. Naizvozvo, vasikana vari nani pane kungotarisa pamanzwiro avo. Kana iwe wakasununguka mune yakajeka chigadzirwa, unogona kuzviita. Kana yakagadzikana isina kugadzirwa, saka haugone kuzviita zvachose.
Asi zvakadaro zvakafanira kuyeuka kuti "vanosangana nezvipfeko, asi vanoperekedzwa nepfungwa." Masekiti ekutanga ndiwo anonyanya kukosha paunenge uchitsvaga interlocutor. Uye mumasekonzi ekutanga unoongororwa chaizvo muchitarisiko. Naizvozvo, nyatsofunga nezve izvo zvauchange uchinge wakapfeka uye nezvekupfeka kwazvinoita. Uye usakanganwa nezvebvudzi racho. Zvichida kuzadza hazvipindiri.
Kana iwe ukacherekedza izvi marudzi ehumwe hunhu: hunhu hwezvipfeko, maitiro uye kugadzira, saka kutaura pavhidhiyo chat roulet zvirokwazvo ichaunza michero: iwe uchawana zvinofadza vanopindira uye kutaurirana kuchave kusingakanganwiki.
Basic mitemo yevhidhiyo kukurukura Russian roulette
Vanhu vanoenda kumavhidhiyo chats kuti vangotaura uye vazorodze zvishoma mushure mekushanda kwezuva rakaoma. Mune imwecheteyo vhidhiyo yekukurukurirana, Russian roulette inogona kusangana nevanhu vanobva munyika dzakasiyana, maguta, akasiyana mamiriro emagariro uye akasiyana mapato ezvemitero. Izvi zvese pamwechete zvinokutendera kuti utaure wakasununguka uye panguva imwe chete uwane yakawanda yekunakidza manzwiro.
Chokwadi, zvese izvi zvinogoneka zvichingoenderana nemirau yakashata yemafambiro pane vhidhiyo yekuita hurukuro. Mitemo yemaitiro inosanganisirwa zvakare mune hunhu. Kuchengeta kwavo kunoreva kuti iwe unonakidza wekutaura uyo anoremekedza manzwiro ake uye anoremekedza mumwe wake wekutaurirana.
Uye ikozvino ngatitarisei pamirau yese yekutaurirana maererano nehukama.
Iyi ndiyo mitemo yakakosha yekutaurirana pane vhidhiyo kutaura Russian roulette:
Remekedza manzwiro eanopindira
Zviremekedze iwe pachako uye manzwiro ako.
sarudza iyo inopindira yezvinofarira
kumisa kusafanira uye kune ngozi kutaurirana
Iyi ndiyo mirawo, kana ikaratidzwa mumutauro wetsika. Iye zvino ngatitarisei kune zvakafanana mitemo maererano nevhidhiyo chat Russian roulette. Ndozvavanotaura:
Iwe haugone kuve hutsinye uye shandisa mazwi ekupika
haugone kutuka munhu nekuda kwechikonzero chero chipi: jenda, zera, ruvara rweganda, zvitendero zvechitendero, maonero ezvematongerwo enyika.
haugone kushandisa bonde kutaurirana
haugone kuoneka muye usina kupfeka
Iwe haugone kuratidza zvimwe zvinhu pane iwe pachako uye kumeso kwako.
Iyi ndiyo mitemo yekutanga. Kana vakanyatso cherechedzwa, kutaurirana, ini ndinodzokororazve, kuchaunza chete yakanaka mibairo.Russian roulette vhidhiyo yekukurukura moderators vanopedza zuva neusiku, kurongedza kuburikidza nekunyunyuta. Uye kazhinji kazhinji avo veRussia roulette vhidhiyo yekushanya vashanyi vanotyora imwe yemirairo inorambidzwa. Chokwadi, ivo havarambidze zvachose, asi kwenguva yakati. Asi kana chakaipa chiri chikuru kana kuti chakakomba, ivo vanogona kubviswa zvachose. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kurasikirwa nemukana wekutaura Russian roulette nehupenzi hwako pachako.
Naizvozvo, zvakakosha zvakanyanya kutevera iyo mirawu yekutaurirana pane vhidhiyo yekukurukurirana Russian roulette.
Kana ino inguva yako yekutanga yekukurukura Russian roulette, unogona kutanga kutaura zvisina kujairika nezve zvese zvepasirese.
Vamwe vashanyi vanonetsa kwazvo kufamba ipapo ipapo. Vanhu vakadaro vanowanzorasika uye havazivi kuti voenderera sei nekukurukurirana, kana iye anopindira akanyarara uye asingaite chero kuedza kuenderera mberi nekukurukurirana.
Sarudzo mbiri dzinogoneka pano:
Iwe sewe unoshingairira kupindira mibvunzo bvunza mibvunzo inotungamira kana kupindura musoro wehurukuro.
iwe unongodzima munhu uyu wotsvaga mumwe
Neraki, muvhidhiyo yekukurukura Russian roulette kune chiuru uye imwe nzira yekutsvaga mutsva interlocutor. Mukutungamira, saiti iyi vhidhiyo yekukurukurirana Russian roulette uye yakavakirwa pakutsvaga kwakasarudzika kwewekutaurirana naye.
Akaita Sei Inotonhorera Russian Vhidhiyo Roulette Interlocutor
Many, vazhinji vashandisi veRussia roulette vhidhiyo kutaura vari kubvunza uyu mubvunzo. Chokwadi, muzviroto anenge munhu wese anozviona seabudirira. Kubudirira mukukurukurirana kwevhidhiyo, zvinoreva jaya rinoshamwaridzika, rinoshanda, rine chivimbo. Asi chii chekuita kana iwe usiri wakasarudzika uye kusagadzikana zvachose?
Zviito zvinotevera zvinogona kubatsira:
Funga usati wataura nezve zvauchataura nemumwe munhu.
Funga nezve kuti ungatanga sei kukurukurirana. Zvinonyanya kuzivikanwa ndezvekuti "Mhoro! Wakadii hako?" Uye usafunge kuti aya ndiwo mutsara wakatemwa kwemazana emakore. Kwete. Kana iwe ukataura zvine hunyoro uye uine yakanaka
kutaura pachiso cheiyi mutsara, ipapo 85% yekutaurirana ichaenderera.
pfeka sezvaunoda. Izvi hazvireve kuti iwe unogona kupfeka underpants yako uye kwete kuzvinetsa pachako neimwe nzira. Naked torso inogona kukanganisa nevakawanda nekuda kwechimwe chinhu chinotsamwisa uye kana kutotanga kurukurirano. Asi iyo T-shati ne jean zvichange zvichikonzera kunzwira uye pane mukana wekuenderera mberi nekukurukurirana. Ehe, sutu yakaoma pane yekutaura vhidhiyo haina basa.
zviri nani kusanganisa bvudzi rako. Ndiani anoda kutaura nemunhu shaggy?
kunyemwerera. Kunyemwerera, asi usaseke. Zvikasadaro, vanogona kufunga kuti uri kuseka munhu wauri kutaura naye. Uye izvi zvinogona kukonzera chishuwo chekudzvanya bhatani "Inotevera".
Uye zvakajairika, yeuka kuti zvese zviri muvhidhiyo hurukuro vanhuwo zvavo, vane zvavo nyaya uye zvavanofunga. Uye vanhu vazhinji kwazvo vanongoitawo kutaurirana kwenguva yekutanga.Zvingave zvakakoshesa kunyange kubvuma kuti iwe uripo kwenguva yekutanga.
Ngative zvakare rangarira izvo zvekudzivirira uchiri kutaura neRussia roulette:
kuridza mhere kukuru
97,007Kuridza misoro yekutaurirana
97,007 nhengo dzemuviri dzisina kupfeka
Kuonekwa muchimiro panzvimbo pechiso chezvimwe zvinhu
Uye isu ngatirangarirai izvo zvinofanirwa kunge zviri muchirongwa chekutaurirana pane vhidhiyo hurukuro Russian roulette:
97,007 yakanaka manzwiro
Mutemo kubvumirana kuenderera mberi nekukurukurirana
Kana zvikangoerekana zvaitika kuti wakaenda kuRussia roulette vhidhiyo yekukurukurirana, asi iwe wakachinjiswa kakawanda mumutsara, usaora mwoyo. Zvinogona kuitika kuti vanhu vari kutsvaga vamwe vanhu vataure navo. Usarasika uye ramba uchitsvaga interlocutor yako. Pasati papera maminitsi mashanu, anowanikwa. Uye kukurukurirana kwakanaka uye kunofadza kuchatanga.